UJK I-Simmons '' Andikho apha 'iyakwenza ukuba unqwenele ukuba ubungekho - Iimuvi
Eyona Iimuvi UJK I-Simmons 'i-Ham-Fisted' andikho apha 'iyakwenza ukuba unqwenele ukuba ubungekho
UJK I-Simmons 'i-Ham-Fisted' andikho apha 'iyakwenza ukuba unqwenele ukuba ubungekho
UJK IiSimon kwi Andikho Apha .Umxhuzulane Ventures
Andikho Apha , ukuze ungabhidaniswa nobubi Andikho apho (apho iqela lababini besini badlala uBob Dylan), yingqokelela yemizuzu engama-81 yokuqokelelwa kwe-amateurish clichés eneenkqubela phambili kaJ. K. Simmons njengesiselo esinxilisayo sokuzibulala esisebenzisa ixesha lakhe elidlulileyo ngaphandle kwencoko. Yayikhokelwe nguMichelle Schumacher, owaziwa njengoNksk Simmons, umfazi weqonga wokwenyani. Kwinkundla yaseHollywood, uqhawulo-mtshato luvunyelwe phantsi kwezizathu ezingaphantsi koku.
Ehleli kwigumbi elimnyama umpu ukhonjwe entloko kunye nomatshini wokuphendula onomyalezo andikho apha, uSteve Harrison (Simmons) uyalila kwisandi sokuhleka konyana wakhe ofileyo. Inkwenkwe ifile, siyafunda, kunye nonina. Umboniso bhanyabhanya uqhubeka ukuchaza ukuba yonke intlekele ebomini bukaSteve yayisiphumo sotywala. Sika kusasa kwangolo suku lunye, xa uSteve ejonga esipilini kwaye ebona ubuncinci bakhe, mhle, enobungqingili (edlalwa ngoyena mncinci, mhle, kwaye ulungile uSebastian Stan, ovela Mna, Tonya ).
ANDIKHO APHA ★
(1/4 iinkwenkwezi )
Yeluswa nguwe: UMichelle Schumacher
Ibhalwe ngu: UTony Cummings, uMichelle Schumacher
Inkwenkwezi: UJK IiSimmons, uSebastian Stan, kunye neIain Armitage
Ixesha lokuqalisa: Imizuzu engama-81.
Ukusika umva nangakumbi, kukho uSteve omncinci eneminyaka eyi-6 ( Sheldon oselula 'Iain Armitage), ejonge utata wakhe ezisela esela engazi nto. Ukuhla ndinyuka phakathi kwala maxesha mathathu, sibona uSteve wangoku, ediniwe kwaye ekupheleni kwentambo yakhe, ezikhumbula eziphindaphinda iimpazamo ezifanayo, ngoku eyedwa kwaye echithiwe, efowunelwa ngumama wakhe oneminyaka engama-90 Ilizwi limnqwenela usuku oluhle lokuzalwa lwama-60. Inqaku lezinto ezibengezelayo kukwenza umbukeli azisole ngendlela uSteve abucaphukise ngayo ubomi bakhe kwaye angawahoyi amathuba okuphucula amathuba okufumana inzuzo kukusilela kwakhe. Kodwa umboniso bhanyabhanya sele umenzile uSteve ukuba azonwabise ngokuzonwabisa kangangokuba mna, ndaphelelwa ngumdla kwangoko.
Ezisondeza ngokuzisizela, uSteve omdala ujikeleza indlu yakhe engenanto, echukumisa izinto ezimkhumbuza ngezehlo ezilusizi zakudala (ibhayisekile yomntwana elahliweyo, imbasa enesidima evela kuTywala engaziwayo ... ufumana umfanekiso) ngelixa sijonga iiwotshi zethu ukubona ishiyeke kangakanani imizuzu engama-81. I-Simmons ithe cwaka i-mopes kwaye i-boozes ngokuzithemba, kodwa wonke umntu onencoko yababini uza njengeplanga yeplywood, enkosi kwiflethi, ehambelana nomlinganiso omnye ngumlawuli kunye neqabane lakhe lokubhala, uTony Cummings. Ulinde isityhilelo esithile esinokukwenza uzive ukuba awuyisebenzisanga le mizuzu engama-81 ngelize. Akusebenzi. Ukuphela okungaqondakaliyo, njengefowuni yokuphendula kaSteve, awukho apha. Umkile kudala.
Ii-albhamu zethu ekulindeleke kakhulu ukuba zenzelwe u-2017
Iingoma ezi-10 eziphezulu ze-Merle Haggard
Sukuphinda uqalise 'ukubuyela kwikamva.' Kodwa ukuba kufuneka yenziwe, nantsi indlela.
UMateyu Barney Akathandani Ngokwenyani noSheryl Crow, kunye nokunye Ukuhleba kweVeki yezixhobo
indlela yokujonga imvelaphi emntwini
iklabhu yokucheba iidola izifumana phi iincakuba zazo
U-emily axford kunye no-brian murphy
ngaphakathi kwiziko lezorhwebo lehlabathi
I-big bang theory yexesha 11 kwi-intanethi yasimahla
Imiboniso bhanyabhanya eyomeleleyo kunye nemidlalo yeTV
umva ukujonga iselfowuni usa